Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 19)
Pixel 3 Lite wuxuu soo bandhigayaa sawir ku xigta Pixel 3: imaanshihiisu wuu dhowaan lahaa
Markii ugu horreysay ee aan maqalno taleefanka, wuxuu lahaa nambarka sumadda 'Sargo', waxayna ahayd goor hore ...
Realme U1 Noocyada Xogta Daadsan: Waxay Isticmaali Doontaa MediaTek's Helio P70 Cusub Iyo In Ka Badan
Realme U1 ayaa lagu daadiyay shabaqa oo ay weheliso qeexitaankiisa farsamo iyo astaamaha muhiimka ah - waxay isticmaali doontaa Mediatek Helio P70 iyo in ka badan.
Jahwareer cusub ayaa ku faafaya soosaarayaasha: hadda, Lenovo wuxuu diiwaangeliyaa taleefan leh kamarad gadaal saddex jeer ah
Soo saare kale oo taleefannada casriga ah ayaa ku biiri doona isbeddellada hadda socda, oo ah in la soo bandhigo qaab cusub oo heer sare ah oo leh kamarad gadaal saddex laab ah, waana Lenovo.
Liiska dukaamada Xiaomi ee Isbaanishka: Dhammaan macluumaadka iyaga ku saabsan
Soo hel liiska dukaamada Xiaomi oo ku yaal Spain si aad u ogaato midka ugu dhow deegaanka aad deggan tahay. Liiska oo dhameystiran.
Galaxy Note 9 oo cadaan ah? Waa rasmi
Waxbadan ka ogow nooca cusub ee cad ee Galaxy Note 9 ee Samsung si rasmi ah ugu soo bandhigtay Taiwan.
Coolpad M3 waa rasmi: taleefan soo gal oo leh HD + panel (19: 9) iyo in ka badan oo qiimo aad u jaban ah
Coolpad M3 hadda waa rasmi. Baro dhammaan astaamaha iyo qeexitaannada farsamo ee casrigaan cusub.
Huawei P Smart 2019 ayaa mar kale daadanaya, markan, oo leh Kirin 710
Huawei p Smart 2019 ayaa ku dhex dusay shabakadaha leh sideed-asaasiga Kirin 710 hoosta daboolka. Ogow dhammaan faahfaahinta!
Samsung waxay ku darsataa qashin qubka galalka loo yaqaan 'One UI gallery'
Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan qashinka ayaa soo bandhigi kara oo lagu soo bandhigay halbeegga 'One UI gallery', lakabka u qaabeynta Samsung.
Ciyaar sharafeedku waa taleefankii ugu horreeyay ee Fuchsia OS leh
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tijaabooyinka 'Honor Play' kaas oo Fuchsia OS lagu soo bandhigay halkii laga isticmaali lahaa Android ahaan nidaamka hawlgalka.
Dukaankii ugu horreeyay ee Xiaomi ee ku yaal Mexico wuxuu horey u lahaa taariikh furitaan
Raadi wax badan oo ku saabsan furitaanka dukaanka ugu horreeya ee Xiaomi ee Mexico kaas oo dhici doona bisha Diseembar, oo ay xaqiijisay shirkadda.
Xiaomi Mi 8 Lite wuxuu ku cusbooneysiiyaa MIUI 10 gudaha Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta MIUI 10 oo si rasmi ah u timaadda Spain illaa Xiaomi Mi 8 Lite, oo ah bartamaha dhexe ee astaanta Shiinaha.
Tani ma noqon doontaa naqshadda Samsung Galaxy M2?
Qaababka qaarkood waxay na tusayaan naqshadda suurtagalka ah ee Samsung Galaxy M2, taleefankii ugu horreeyay ee laga helo soo saaraha Kuuriya kaas oo ku dari doona shaashadda shaashadeeda.
Samsung Galaxy A9 hadda waxaa laga heli karaa Spain
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday helitaanka Galaxy A9 ee Spain. Ogow faahfaahinta qiimaheeda iyo halka aad ka iibsan karto!
Heshiisyadii jimcaha ugu fiicnaa ee Movilshacks
Soo ogow jimcaha madoow ee aan ka helno Movilshacks oo 70% qiimo dhimis ku leh taleefannada iyo agabyada.
Maamuus 10 Lite: Nooca cusub ee bartamaha
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Honor 10 Lite, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee sumcadda Shiinaha horayba si rasmi ah ugu soo bandhigtay Shiinaha.
Huawei wuxuu diiwaangeliyaa magacyo badan oo moodallo ah oo loogu talagalay taleefannada sharafta mustaqbalka
Huawei waxay diiwaangelineysaa dhowr magac oo moodeellada casriga ah ee mustaqbalka. Ogow dhammaan faahfaahinta warkan.
Taxanaha 'Galaxy M' ee Samsung wuxuu bilaabaa inuu muujiyo astaamaha nolosha: Galaxy M2 ayaa ka muuqda Geekbench
Samsung Galaxy M2 oo loo maleynayay in lagu sii daayay Geekbench oo ay weheliso afar geesle Exynos 7885. Ogow faahfaahinta.
Meizu 16S waxaa si wada jir ah loo bilaabi doonaa adabtarada oo leh giraan muusiko oo gooni ah
Maamulaha Meizu Jack Wong ayaa ku dhawaaqay in Meizu 16S lagu sii deyn doono adabtarada qalabka muusikada oo gooni ah. Soo ogow!
Taleefanka 512GB Asus ROG ayaa hadda laga heli karaa iibka Mareykanka
Telefoonka Asus ROG oo wata 512GB oo ah keyd gudaha ah ayaa si rasmi ah looga bilaabay Mareykanka. Ogow qiimaha iyo faahfaahinta!
Xiaomi Mi A2 miyaa leh dhibaatooyin xawaaraha kaydinta ah?
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatada saameyneysa qaar ka mid ah moodooyinka Xiaomi Mi A2 iyo in isticmaaleyaal badani ka cawdaan shabakadaha maanta.
Sida wax looga beddelo amarka astaamaha bar tilmaameedka ee Android
Wax ka beddelka nidaamka astaamaha lagu soo bandhigay bar-hawleedka waa geedi socod aad u fudud oo aan hoos ku tusi doonno.
Samsung Galaxy S10: waxaa jiri doona nooc afaraad oo war lagu rakibayo
Daadinta cusub ayaa xaqiijinaysa jiritaanka nooc afaraad oo Samsung Galaxy S10 ah oo loo yaqaan 'Beyond X' kaas oo soo bandhigi doona qalab yaab leh.
Meizu 16 wuxuu leeyahay dhaxal suge: soo bandhigida meizu 16S ayaa hada si toos ah looga sii daayay internetka waxayna muujineysaa muuqaalada qaab dhismeedka quruxda badan.
Waxaad ficil ahaan uga badbaadi kartaa naftaada inaad ogaato waxa kujira wicitaanada adoo wata qoraalada aad ku keydisay Google Pixels
Cilad ku jirta Pixel 3 waxay keentaa in kaamirada ay shaqeyso oo taleefanka waa in dib loo bilaabo. Ogow dhammaan faahfaahinta xukunkan cusub.
OxygenOS Open Beta 7 wuxuu ku imaanayaa OnePlus 6 oo leh shaqooyin cusub oo xiiso leh
War wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha OnePlus 6: OxygenOS Open Beta 7 ayaa hadda loo heli karaa qalabkan. Ogow warka ay keento!
Samsung Galaxy S10, faahfaahin cusub oo ku saabsan shaashadeeda iyo midabada la heli karo
Macluumaad cusub ayaa la daadiyay oo muujinaya faahfaahin cusub oo ku saabsan Samsung Galaxy S10 midabka midabka leh iyo xulashada bandhigyada.
Miyaan ka heli doonnaa taleefan cusub oo laaban karo Samsung sanad walba?
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah inay soo saaraan taleefan cusub oo laallaabi karo sannad kasta inta ay ku jiraan taleefannadooda shir ka dhacaya Kuuriya.
MIUI 10 beta oo leh Pie Android wuxuu yimaadaa Pocophone F1
Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka 'Android Pie beta' ee leh MIUI 10 oo hadda imanaya Pocophone F1. Nooca xasilloon ayaa goor dhow soo socda.
Meitu waxay bilaabaysaa inay soo saarto taleefan leh saddex kamaradood oo hore
Meitu waxay diyaarinaysaa taleefan casri ah oo cusub; mid iman doona oo leh saddex kamaradood oo hore. Waxaan balaarineynaa faahfaahinta.
Xiaomi waxay ka jawaabtaa dhibaatada dhalaalaysa shaashadda ee Mi Mix 2S waxayna sharraxaysaa sababta ay u dhacdo
Xiaomi Mi Mix 2S waxay leedahay dhibaatooyin shaashad marka sawirro iyo fiidiyow laga qaadanayo arjiga kamaradda. Xiaomi ayaa ka jawaabtay tan.
Nubia waxay soo saari doontaa taleefan cusub oo ciyaaraha ah 28ka Noofambar, waana Red Magic Mars
Nubia waxay xaqiijisay bilawga Red Magic Mars bisha soo socota ee Nofeembar 28 dhacdo. Ogow faahfaahinta warkan.
Xaday Nokia 9 PureView Cases Xaqiiji 5-Camera Setup
5 kamaradood oo dhabarka kuyaala ayaa leh Nokia 9 PureView sida aan ognahay kiisaska silikoonka ee loo isticmaali karo mobilkaan
Telefoonka cusub ee Nokia ayaa horey u lahaa taariikhda soo bandhigida
Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee Nokia oo dhici doona 5-ta Diseembar. Telefoonku wuxuu noqon karaa Nokia 8.1
HTC waxay ku dhawaaqeysaa inaysan jiri doonin HTC U13 +
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta in uusan jiri doonin nooc cusub oo ku jira heerka sare ee HTC sanadka soo socda.
Asus Zenfone Max Pro M2 wuxuu ahaan doonaa taleefan ciyaar wuxuuna imaanayaa bisha Diseembar 11
Xaqiijiyay: Asus ZenFone Max Pro M2 wuxuu ku dhufan doonaa suuqa bisha Diseembar 12 iyada oo ah taleefan casri ah oo loogu talagalay cayaaraha.
Huawei P Smart 2019: sawirradii ugu horreeyay iyo astaamaha xaday
Waxaan kuu soo qaadaneynaa qaababka iyo naqshadeynta Huawei P Smart ee 2019, taleefanka cusub ee soo saaraha Aasiya
Android Pie waxay sii wadaa ballaarinta: hadda waxaa loo heli karaa Xiaomi Mi A2 iyo Motorola Moto One Power
Android Pie hadda waa la heli karaa si loogu rakibo Xiaomi Mi A2 iyo Motorola One Power ee Hindiya. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + waxay helayaan beta-ka One UI oo ku saleysan Android Pie: sida loo rakibo
Nooca beta ee lakabka khaaska ah ee Samsung, One UI, ayaa hadda loo heli karaa Galaxy S9 iyo S9 + wuxuuna ku saleysan yahay Android Pie.
Oppo A7 waa la bilaabay: astaamaha, tilmaamaha farsamada, qiimaha iyo helitaanka
Oppo A7 hadda waa rasmi. Baro dhammaan astaamaheeda, qeexitaannadiisa farsamo, qiimaha iyo helitaanka suuqa.
UMIDIGI wuxuu gali doonaa suuqa Latin America maalinta Jimcaha soo socota
Warka wanaagsan ee Latin America: UMIDIGI wuxuu suuqan soo gaari doonaa Jimcaha soo socda ee Madoow iyadoo dalabyo laga helayo taleefannadiisa gacanta oo loogu talagalay dalal dhowr ah.
Maamuusku wuxuu ahaa nooca ugu sarreeya ee Shiinaha laga iibiyo ee Singles Day smartphone
Honor, shirkadda sub-brand ee Huawei, ayaa ku dhawaaqday inay ahayd tii ugu waxqabadka badnayd Maalinta Singles marka la eego mugga iibka iyo dakhliga.
Huawei waxay diyaarisaa kaaliyeheeda codka ee caqliga badan
Huawei waxay shaqeyneysaa saacad kasta si ay u keento caawiye cusub oo xagga suuqa ah. Waxaan balaarineynaa faahfaahinta tan.
War wanaagsan: OnePlus 5 iyo 5T ayaa dhawaan heli doona Android Pie
Haddii aad tahay mulkiilaha OnePlus 5 ama 5T, hambalyo. Dhawaan waxaad heli doontaa cusboonaysiinta 'Android Pie' qalabkaaga.
POCOPHONE F1 Armored wuxuu yimid Spain si rasmi ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka noocyadan gaarka ah ee Pocophone F1 Armored in Spain halkaasoo si rasmi ah looga iibsan karo.
Meizu wuxuu doonayaa inuu noqdo shirkadii ugu horeysay ee taleefoon ka furata Snapdragon 8150
Xanta qaar waxay soo jeedinayaan in Meizu uu noqon doono sumaddii ugu horreysay ee saldhig ka furata Snapdragon 8150, waxayna noqonaysaa bisha Diseember ee sannadkan.
Faahfaahin muhiim ah ayaa ka dusay Asus Zenfone Max Pro (M2) iyo Zenfone Max M2
Macluumaad cusub ayaa soo ifbaxaya oo ku saabsan taleefannada soo socda ee Asus. Waxaan ka hadlaynaa Zenfone Max Pro (M2) iyo Asus Zenfone Max M2.
Huawei wuxuu sharad ku sameeyaa tilmaamaha
Huawei wuxuu sii wadaa inuu hagaajiyo EMUI wuxuuna ku dari doonaa cusbooneysiin weyn oo ku saabsan xakamaynta tilmaanta inta badan qalabkeeda
Exynos 9820: processor-ka Samsung Galaxy S10
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan processor-ka sare-dhamaadka ah ka raadi sumadda Kuuriya, Exynos 9820, oo loo adeegsan doono Samsung Galaxy S10.
Cilad ku timid Pixel 3 waxay keenaysaa in farriimaha la tirtiro
Raadi wax badan oo ku saabsan cayayaanka cusub ee saameeya taleefanka Google, xaaladdan Pixel 3. Waxay keentaa in farriimaha la tirtiro.
Tani waa waxa midabka cusub ee Samsung Galaxy u eg yahay
Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa hadda soo saartay cadad gaar ah oo ah Galaxy S9 oo laga leeyahay Shiinaha.
Waxaa jiri doona Samsung Galaxy S10 Lite, kuwani waa astaamaheeda suurtagalka ah
Samsung waxay ka shaqeyneysaa Samsung Galaxy S10 Lite, oo ah nooc decaf ah oo ka mid ah calankeeda soo socota oo soo bandhigi doonta qalab aad u awood badan.
Bixinta Xiaomi Mi 9 ayaa u muuqata oo ay weheliso qeexitaankeeda farsamo ee suurtogalka ah
Bixinta Xiaomi Mi 9 ayaa ka soo muuqatay khadka tooska ah iyada oo ay weheliso qeexitaankeeda farsamo ee suurtagalka ah iyo astaamaha. Baro dhammaantood!
Vivo Y95 ayaa hadda ah mid rasmi ah oo leh astaamo gaar ah iyo astaamo dhexdhexaad ah
Vivo Y95 mar horeba waa rasmi oo leh astaamo dhowr ah iyo qeexitaanno farsamo oo caadi ah oo u dhexeeya dhammaan heerarka dhexe. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Faahfaahin horudhac ah oo maskaxda lagu hayo Samsung Galaxy S10
Samsung waxay ku dhowdahay inay diyaariso Galaxy S10 oo la imaan doona teknoolojiyad cusub oo taxane ah oo ku ridi doonta meel mudnaan leh.
Xiaomi Mi 8 Pro iyo Mi 8 Lite waxay yimaadeen Spain
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka Xiaomi Mi 8 Pro iyo Mi 8 Lite si rasmi ah Spain iyo qiimaha iibka rasmiga ah.
Faahfaahin dheeraad ah ka hel bilowga rasmiga ah ee taleefanka 'ASUS ROG Phone' ee Isbayn. Nooca casriga ah ee casriga ah ee casriga ah ayaa hadda rasmi ah.
Midabka OnePlus 6T ee Thunder Purple color wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka OnePlus 6T ee guduud rasmi ahaan Spain. Telefoonku wuxuu bilaabmayaa Nofeembar 15.
Kaamirada Samsung Galaxy S10 ayaa gacan ka geysan doonta hagaajinta is-maamulkeeda
Faahfaahinta cusub ee Samsung Galaxy S10 waxay xaqiijineysaa booska aaladda kamaradaha qalabka si loo keydiyo booska loona isticmaalo batteri leh awood sare.
Madaarka loo yaqaan 'Black Shark Helo' ma laga sii deyn doonaa Yurub?
The Xiaomi Black Shark Helo, jiilka labaad ee casriga casriga ah ee ciyaaraha Shiinaha laguma soo bandhigi doono Yurub, ugu yaraan hadda.
Oukitel U23 Qeexitaannada
Marka xigta waxaan kuusoo bandhigeynaa dhammaan qeexitaannada saldhigga xiga ee shirkadda Oukitel, U23.
OnePlus si loo soo bandhigo taleefan 5G ah sanadka 2019 iyadoo la adeegsanayo magac cusub
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka taleefankan cusub ee 5G-ga ah OnePlus oo wata magac cusub oo lasoo bandhigi doono 2019,.
Samsung ayaa dhowaan bilaabaysa taleefannada kala duwan ee Galaxy M
Ka ogow wax badan oo ku saabsan noocyada cusub ee Galaxy M ee ay Samsung suuqa ka bilaabayso sannadka dambe, si loo cusbooneysiiyo heerkeeda dhexe.
Samsung Galaxy A waxay isticmaali doontaa shaashadaha LCD
Ka ogow wax badan oo ku saabsan sababaha ay Samsung u adeegsan doonto shaashadaha LCD ee taleefannadeeda kala duwan ee Galaxy A sanadka oo dhan 2019.
Huawei wuxuu soo saari lahaa taleefannada kamarad hore oo ka hooseysa shaashadda
Huawe waxay ka shaqeyneysaa isku dhafka kamaradda hore ee shaashadda, sida ku cad shati cusub oo sir ah. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.
Qalabka Android ee loogu talagalay Galaxy S9 ayaa la bilaabi karaa, oo leh beta-kiisa ugu horreeya, Nofeembar 15
Markii ay ahayd dhowr bilood tan iyo markii baadi goobka la sii daayay nooca ugu dambeeya ee Android ...
Xiaomi Black Shark wuxuu horey u leeyahay taariikh la bilaabayo Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taariikhda la soo saaray ee Xiaomi Black Shark ee Yurub, oo shirkaddu ku dhawaaqday. Waxaa laga bilaabay 28 dal oo Spain ka mid tahay.
Samsung Galaxy J4 Core: Qaabka cusub ee wata Android Go
Galaxy J4 Core: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Kuuriya oo si rasmi ah loo soo bandhigay.
Huawei's Band 3 Pro iyo Band 3e Smart Wristbands Hadda waxaa laga heli karaa Mareykanka
Huawei wuxuu ka bilaabay Maraykanka 3 Band-Pro iyo Band 3e. Ogow dhammaan faahfaahinta qiimaha iyo helitaanka kuwan.
Processor-ka cusub ee Samsung wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhig
Samsung waxay soo bandhigeysaa processor-keeda cusub oo ka imanaya Exynos si rasmi ah bisha Nofeembar 14 waxaanan horey u ogaanay faahfaahin qaar.
Google Pixel 3 wuxuu sii wadaa dhibaatooyin: hadda wuu kululaanayaa waana la xidhayaa inta la dalacayo
Pixel 3-ka Google ayaa dhibaato ku qaba lacag-bixinta. Marka loo eego waxa isticmaalayaasha kaladuwan ay soo sheegeen, wuu xidhayaa markuu kululaado. Waan kuu balaarinay!
Tidal wuxuu ku dhawaaqay daahfurka barnaamijkiisa u gaarka ah Samsung smartwatches
Madal-socodka muusigga ee Tidal, ayaa hadda bilaabay codsi ugu horreeyay ee lagu xidho gacanta gacanta Samsung smartwatches oo ay maamusho Tizen.
Vivo X21s, taleefanka cusub ee leh Snapdragon 660 iyo akhristaha sawirka faraha
Vivo X21s waxaa laga bilaabay Shiinaha iyadoo la adeegsanayo Snapdragon660 iyo akhristaha sawirka faraha. Waxaan ku siinaynaa astaamaha iyo tilmaamaha.
LG Q9, qaabkan ayaa xaqiijinaya nashqadeynta
Bixin ayaa la daadiyay taas oo muujineysa nashqadda LG Q9, bartamaha cusub ee soo saaraha Kuuriya oo lagu soo bandhigi karo MWC 2019.
Samsung W2019 horeyba waa rasmi, waana taleefanka ugu qaalisan shirkadda
Samsung W2019 hadda waa rasmi. Baro dhammaan faahfaahinta taleefanka casriga ee cusub ee Kuuriyada Koonfureed leh Snapdragon 845.
Haa, ugu dambeyn Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8 ayaa heli doona One UI
Samsung interface-kiisa cusub ee loo yaqaan 'One UI interface' wuxuu aakhirka imaan doonaa Galaxy S8 iyo Xusuusin 9. Iskuxir kuxiran dulucda mugdiga.
Samsung ayaa sharad ku geli doonta dareeraha faraha ee shaashadda
Raadi wax badan oo ku saabsan nooca dareeraha faraha ee Samsung ay u adeegsan doonto bartamihiisa sanadka soo socda si rasmi ah.
Faahfaahin: tani waa Kirin 980, SoC ee Huawei's Mate 20 taxanaha
Naqshadda shirkadda Huawei ee HiSilicon Kirin 980 ayaa si faahfaahsan loo muujiyay. Wax ka baro shirkadda 7nm SoC ee ugu horreysa.
Haddii aad haysato Galaxy S8 ama Note 8, waxa kaa dhammaanaya One UI, interface-ka cusub ee Samsung
UI One waa isdhexgalka cusub ee la yimaada Android Pie ee Galaxy S9, Xusuusin 9 iyo Galaxy S10 ee xigta. Galaxy S8 ayaa la’aanteed.
Fossil Sport: Wear OS iyo Snapdragon Wear 3100 loogu talagalay smartwatch-kan
Fossil Sport: Smartwatch-kii ugu horreeyay ee leh Snapdragon Wear 3100. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan astaanta cusub ee 'Wear OS smartwatch'
Samsung ayaa nacas ka dhigeysa dhammaan tartamada iyada oo "qaan-gaar ah"
Shaashadda infinity-ka iyo moobilka isku laabmaya ayaa nacas ka dhigaya dhammaan tartamada Samsung ee isticmaalay qaanuunka si ay isugu dayaan inay wax cusub u cusboonaysiiyaan.
Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer iyo Mi MIX 2S waxay helayaan waxqabadka kamaradda 'Habeenka Habeen' ee beta xiran
Habeenkii Habeenkii ama Habeenkii Xiaomi Mi Mix 3 ayaa la heli doonaa, wax yar, Mi 8, Mi 8 Explorer iyo Mi Mix 2S.
Bixby Isbaanishka hadda waa run
Ka ogow wax badan oo ku saabsan wararka Bixby, kaaliyaha Samsung, oo horeyba ugu hadlaa Isbaanishka si rasmi ah, iyo sidoo kale luuqado kale.
MIUI 10 horeyba waa loo heli karaa in kabadan 30 taleefannada Xiaomi. Eeg liistada dhameystiran ee taleefannadan casriga ah ee la jaan qaadaya noocyadan
Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka Samsung, kaas oo aan horeyba u haysannay xog iyo sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah.
Liiska boosteejooyinka la jaan qaadi kara barnaamijka dhabta ah ee Google, ARCore, ayaa hadda la ballaariyay iyadoo lagu daray seddex qalab oo cusub.
Ku hel BQ kaliya 1 euro oo ku mahadsan Black Friday
Jimcahan Madow waxaad ka heli kartaa qalabka BQ ee 1 euro, kaliya waa inaad iska qortaa Liiska Madoow oo aad noqotaa midka ugu dhaqsaha badan maalin kasta.
Ka faa'iideyso 11.11 qiimo dhimis ah taleefannada OUKITEL
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimo dhimista taleefannada OUKITEL munaasabadda 11.11. Qiimo-dhimista illaa 50% ee noocyadeeda casriga ah.
Sida loo raaco soo bandhigida taleefanka isku laaban ee Samsung
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka isku laaban ee Samsung, oo ka dhici doona 19:00 Spain toos.
Xiaomi waxay ku jirtaa 82 suuqyada shisheeye
Xiaomi way sii kordheysaa. Shirkadda Shiinaha ayaa soo bandhigeysa guusha ay haysay waxayna xaqiijineysaa joogitaankeeda 82 suuqyo shisheeye.
Muuqaal fiidiyoow iyo sawirro cusub ayaa soo ifbaxaya Nokia 9, taleefanka oo leh shan kamaradood oo gadaal ah
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa HMD Global ee soo socota, Nokia 9. Haddaba, muuqaal-bixiye cusub iyo sawirro ayaa halkan yaal.
Dhibaatooyinka xusuusta ee Pixel 3 waxaa lagu xallin doonaa cusbooneysiin u oggolaan doonta inay yeeshaan barnaamijyo badan oo furan mar kale.
Kahor 11.11 oo leh heshiisyada ugu fiican eBay
Ka faa'iideyso heshiisyada ugu fiican ee taleefannada Android munaasabadda 11.11 ee eBay adigoon sugin taariikhdan dukaanka caanka ah.
LG G7 Fit wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka LG G7 Fit si rasmi ah Spain, qiimaha ay ku awoodi doonto inay ku iibsato iyo qeexitaankiisa.
Ka faa'iideyso dalabyadan Sharafta leh oo ku hel taleefannada gacanta kaliya 1 euro
Haddii aad raadineyso mobiil ama smartband qiimo wanaagsan, ma seegi kartid fursadda inaad uga faa'iideysato deeqaha Sharafta la siiyo sannadguuradeeda.
Soodhawaynta astaamaha muhiimka ah iyo qeexida Sharafta V20, astaanta soo socota ee astaanta
Kala shaandheeyay astaamaha muhiimka ah iyo qeexitaannada ay 'Honor V20' la imaan doonto, qalabka waxqabadka sare ee xiga ee shirkadda ka socda.
Samsung waxay ku soo bandhigi doontaa moobilkeeda shaashad isku laaban San Francisco laba maalmood gudahood. Qalab noqda kiniin ama mobiil.
OUKITEL U23: Taleefanka casriga ah ee cusub ee noocyadiisu sarreeyaan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan OUKITEL U23, taleefanka cusub ee cusub ee soo saaraha Shiinaha ee aad ku qaadan karto qiimo dhimis bilowgeeda.
YouTube wuxuu ku darayaa Mate 20 cusub liistada qalabka lagula taliyay inuu ku raaxeysto YouTube
Liiska terminal-yada la jaan qaadi kara YouTube-ka ayaa la ballaariyay iyadoo lagu daray Mate 20 cusub oo ka socda Huawei iyo Pixel 3 oo ka socda Google
OnePlus 6T wuxuu dhowaan ku imaanayaa midab cusub
Raadi wax badan oo ku saabsan midabka cusub ee OnePlus 6T lagu soo bandhigi doono suuqa ka dib markii uu ku sii daayo dhammaadka wiiggan boggiisa.
OnePlus wuxuu sharraxayaa sababta OnePlus 6T uusan u lahayn ogeysiisyo LED ama caabbinta biyaha
OnePlus ayaa sharraxay sababta ay xarunteeda cusub, OnePlus 6T u lahayn nidaam ogeysiis LED ah ama biyo diid ah.
Naqshadaynta Samsung Galaxy S10 ayaa dhammaad ku dhow
Xan cusub ayaa soo jeedinaysa in naqshadda Samsung Galaxy S10 ay diyaar u tahay. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta bayaankan dhowaan.
Sifeeyay qiimaha Xiaomi Mi 8 Lite ee Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha 'Xiaomi Mi 8 Lite' uu ku yeelan doono bilowgeeda Yurub labadiisa nooc oo kala duwan.
Samsung waxay furi doontaa Bixby API
Raadi wax badan oo ku saabsan sababta Samsung ay ugu fureyso Bixby API horumariyeyaasha astaamo dheeri ah.
Huawei durba waxaa loo caleemo saaray inuu yahay kan labaad ee ugu iibinta badan adduunka. Raadi inta ay iibiyeen rubuca saddexaad.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha oktoobar 2018, sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan bisha Oktoobar ee sannadkan, kuwaas oo ay ku jiraan Xiaomi Black Shark iyo kuwa kale.
Xiaomi Black Shark Helo waa tartan la'aan: Nubia Red Devils eSport waxay imaan doontaa Nofeembar 6
Xaqiijiyay: Nofeembar 6, Nubia waxay soo bandhigi doontaa Nubia Red Devils eSport oo ah taleefan casri ah. Waxay yeelan doontaa 10 GB oo RAM ah!
ZTE wuxuu dib-ugu-galayaa Mareykanka, markan, oo leh Blade Max View iyo Blade Max 2s
Ka dib cunaqabateyn dhowr ah oo Mareykanku saaray ZTE iyo heshiiskii iyaga ka qaaday, shirkadda ayaa mar labaad dalka ka bilaabaysa telefoonno. Markan, illaa laba terminaal.
Vivo Z1 Daabacaadda Dhallin-yarada, nooca dhexe ee la awoodi karo ee hadda la heli karo ka hor-dalab
Daabacaadda Dhallinyarada ee Vivo Z1 ayaa hadda loo heli karaa horay loogu sii amro Shiinaha. Ogow dhammaan faahfaahinta dhaqaalahan cusub ee dhexdhexaadka ah.
Vivo Y93 waxaa lagu bilaabay 6.2 ″ HD + shaashad, Snapdragon 439 iyo in ka badan
Vivo Y93 wuxuu hadda si rasmi ah ugu shaqeynayaa Snapdragon 439 gudaha. Baro dhammaan astaamaha, qeexitaanada farsamo iyo qiimaha taleefankan cusub.
Taleefanka 'clamshell' Samsung W2019 wuxuu horey u lahaa taariikh la bilaabayo, waana bisha soo socota ee November 9
Xaqiijiyay: bisha soo socota ee Nofeembar 9, Samsung waxay ku qaban doontaa dhacdo Shiinaha halkaasoo ay ka bilaabi doonto Samsung W2019, taleefan cufan leh.
Lenovo Z5 Pro hadda waa rasmi: Shaashadda saraysa iyo qiimo jaban
Raadi wax badan oo ku saabsan Lenovo Z5 Pro, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee dhexdhexaadka ah ee ka soo baxa nooca Shiinaha oo leh shaashad isbadal leh iyo shaashad shaashad gudaha ah.
Telefoonada Xiaomi ayaa durba imanaya Yoigo
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan heshiiska u dhexeeya Xiaomi iyo Yoigo taas oo ay taleefannada taleefanka Shiinaha ku bilaabmayaan in lala helo hawl wadeenka.
Telefoonka LG ee isku laaban ayaa horey u leh taariikhda soo bandhigida
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taariikhda daahfurka taleefanka LG ee laaban karo oo si rasmi ah uga dhacaya CES 2019 bisha Janaayo.
Energizer E500S wuxuu ka bilaabmayaa Yurub iyadoo la socota Android Go wax ka yar 100 euro
Energizer E500S oo wata 'Android Go' ayaa si rasmi ah uga jira Yurub kaliya 99,99 euro. Baro waxa cusub ee soo saaraha bateriga Mareykanka.
Midkoodna kama iman Samsung, ama Huawei, ama mid kale: taleefannada casriga ah ee isku laaban waa mid rasmi ah oo ka yimid Rouyu
Rouyu FlexiPai waa rasmi. Wax ka baro dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo iyo qiimaha aaladda casriga ah ee ugu laaban adduunka.
Android Pie ayaa loo sii daayay Nokia 6.1 Plus; Nokia 3, 5 iyo 6 ayaa la xaqiijiyay in la heli doono goor dambe
Waa war wanaagsan! Nokia 6.1 Plus wuxuu durbaba si rasmi ah u helayaa Android 9.0 Pie. Qalabka kale ayaa sidoo kale heli doona.
Nubia X waa rasmi: ogow dhammaan faahfaahinta astaanta cusub ee sumadda
Nubia X hadda waa rasmi. Baro dhammaan sifooyinka, qeexitaannada farsamo iyo qiimaha barta cusub ee sumadda leh shaashad laba-jibaaran.
The Honor Magic 2 hadda waa rasmi: Dhamaadka sare ee cusub ee leh shaashad iskeed u socota
Sharaf sixir 2: Sooc, qiimayn iyo bilaabid. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Shirkadda Sony ayaa kaliya ku guuleysatay inay iibiso 1.6 milyan oo taleefano ah rubucii saddexaad ee sanadkan
Sony waxay sii wadaa inay soo dirto khasaaro weyn qaybta casriga ah. Markan, shirkaddu waxay kaliya ku guuleysatay inay rarto 1.6 milyan oo terminal ah Q3.
Nokia 7.1 ayaa si rasmi ah loogu iibinayaa dalka Mareykanka
Nokia 7.1 horeyba waxaa looga heli karaa dhulka Waqooyiga Ameerika si rasmi ah. Ogow faahfaahinta iyo qiimaha terminal-kan dalka.
BlackBerry KEY2 LE ayaa yimid Spain
BlackBerry Key2 LE ayaa si rasmi ah u yimid Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo-saarista taleefanka cusub ee waddankeenna.
Akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Nokia 6.1: Android 9 Pie ayaa hadda loo heli karaa taleefanka
Nokia 6.1 horeyba waxay u heleysaa nooca xasiloon ee Android 9.1 Pie. Ogow dhammaan faahfaahinta warkan.
Ma mudan tahay in loo cusbooneysiiyo OnePlus 5 / 5T-ga cusub ee OnePlus 6T?
Shalay jiilka cusub ee shirkadda OnePlus ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, 6T, oo ah terminaal loo qaadan karo ...
Xiaomi ayaa horay u sii socota: Pocophone F1 wuxuu heli doonaa Android Q markay bilaabeyso
Pocophone F1 ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android Q markii la bilaabo, sida ku cad xaqiijinta uu bixiyay sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda.
Kaamirada Samsung Galaxy S10 ayaa diyaarinaysa waxyaabo lama filaan ah oo waaweyn
Samsung ayaa hadda soo bandhigtay jiilkeeda cusub ee dareemayaasha ISOCELL kuwaas oo kor u qaadi kara kamaradda Samsung Galaxy S10 waxayna keeneysaa lama filaan xiiso leh.
Xiaomi Mi 8 Lite wuxuu bilaabmayaa safarkiisa caalamiga ah: hadda waxaa laga heli karaa Faransiiska iyo Ukraine
Xiaomi Mi 8 Lite ayaa horeyba looga heli karaa Faransiiska iyo Ukraine. Waxbadan ka baro waxa afhayeenka shirkada sii daayay.
Isbarbardhiga OnePlus 6T ee OnePlus 6
Ka dib markaan daboolno bandhigeeda rasmiga ah waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhig buuxa ee OnePlus 6T oo ka dhan ah OnePlus 6. Beddelka taleefanka ma u qalmaa?
Telefoonka 5G ee ugu horreeya OnePlus wuxuu horey u haystay taariikh sii deyn ah
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda OnePlus ay bilaabeyso taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G ee Yurub. Calaamaddu waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee suuqa.
Meizu wuxuu sharxayaa sababta uusan u daah furi doonin taleefanka 5G sanadka soo socda
Meizu wuxuu sharxayaa sababta aysan u furi doonin terminal awood u leh inuu taageero shabakadda 5G sanadka soo socda. Ogow faahfaahinta xaqiijintaan cusub.
Oukitel U23: heerka midabaynta iyo dhabarka dhabarka
Calanka cusub ee Oukitel ayaa ah U23, terminal u taagan isutag iyo midab dhabarkiisa midab leh.
Tilmaamaha farsamada ee 'Honor Magic 2' ayaa lagu sii daayay AnTuTu dhawaan. Baro astaamaha noocyadan sare ee soo socda.
OnePlus ayaa hadda soo bandhigtay OnePlus 6T, oo ah astaanta cusub ee shirkadda Aasiya ee u taagan akhristaha faraha ee ku dhexjira shaashadda.
Xiaomi waxay xaqiijisay in usbuucaan oo dhan aan awoodi doonno inaan cusbooneysiinno Pocophone F1 ilaa Android 9 Pie mahadsanid imaatinka MIUI 10.
Ma ka daashay cusboonaysiinta Samsung Galaxy? ku eedee google
Sida muuqata, Google waxay ku qasbeysaa soosaarayaasha inay sii daayaan shaashado amni oo joogto ah, sidaa darteed cusbooneysiinta joogtada ah ee Samsung Galaxy.
Saamiga shaashadda ee Samsung Galaxy S10 Plus ayaa kaa yaabi doona
Daadinta cusub ayaa ina tusaysa saamiga shaashadda ee Samsung Galaxy S10. Haddayna run tahay, waxaan horjoogi doonnaa taleefoonka oo aan ka yareyno looxyada hore.
Dukaanka ugu horreeya ee Xiaomi ee Boqortooyada Midowday wuxuu horey u leeyahay taariikh furitaan
Dukaanka Xiaomi ee Boqortooyada Midowday ayaa furmi doona 10-ka Nofeembar. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dukaanka ugu horreeya ee sumadda Shiinaha ee dalka ku taal.
Samsung Galaxy A6s, taleefanka cusub ee Kuuriyada Koonfureed ee aan isla soo saarin
Samsung Galaxy A6s waa rasmi; taleefankii ugu horreeyay ee shirkadda Kuuriyada Koofureed ay sameyso shirkad kale. Ogow astaamaheeda iyo qiimaheeda.
Dhibcaha DXOMark ee Huawei's Mate 20 lama shaacin maadaama ay aad u sarreeyeen. Baro faahfaahin dheeraad ah.
Oppo A7: miisaaniyadda xaddidan ee miisaaniyadda dhexe ayaa u dhow
Tilmaamaha, noocyada, qiimaha iyo helitaanka Oppo A7 ayaa mar kale la daadiyay. Baro dhammaan wixii ku saabsan qalabkan soo socda.
Samsung ma rabto inay wax uun uga tagto dhuumaha oo ay moobilkeeda cusub ee isku laaban u wada tago dhammaan. Waxaan ka ognahay qaar ka mid ah faahfaahinta cusub ee ku saabsan.
Telefoon kale ayaa la imaan doona 10 GB oo RAM ah, waana Nubia Red Magic 2
Xaqiijiyay: Red Magic 2 oo ka socda Nubia wuxuu ku imaan doonaa awood dhan 10 GB oo RAM ah. Waxaan ku siineynaa faahfaahinta warkan.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadan doontaa Xiaomi inay gaarto 100 milyan oo taleefanno iib ah?
Xiaomi waxay gaareysaa 100 milyan oo taleefanno adduunka oo dhan laga iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka sumadda Shiinaha ee adduunka oo dhan.
Samsung Galaxy S10 iyo Huawei P30 ayaa la imaan doona noocyo 12GB RAM ah
Noocyada ugu horumarsan ee soo socda Samsung Galaxy S10 iyo Huawei P30 ayaa lagu qalabeyn doonaa 12 GB oo RAM ah. Soo ogow!
Meizu M8 Note wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 632 iyo in ka badan
Meizu M8 Note waa rasmi oo ay weheliso Snapdragon 632 gudaha. Baro dhammaan astaamaha aaggan dhexe ee cusub.
Xiaomi Mi Mix 3: Shaashadda oo dhan oo leh shaashad iskeed u socota
Xiaomi Mi Mix 3: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
Naqshadaynta 'Honor Magic' 2 ayaa la muujiyay ka dib markii fiidiyow duubay
Fiidiyow ayaa la daadiyay oo muujinaya naqshadda 'Honor Magic 2', marka lagu daro sawirro saxaafadeed oo kala duwan oo muujinaya kamaraddeeda is-dulsaaran.
Google waxay aqoonsan tahay cilada ku jirta kamaradda Pixel markay keydineyso sawirrada
Raadiyaha baadi goobku wuxuu aqoonsaday in Pixels-ka qaar ay dhibaatooyin qabaan marka ay timaado in sawirradooda lagu keydiyo ciribta.
Ilaalinta Sharafta waxay horey u leedahay taariikh soo bandhigid
Ilaalinta Sharafta ayaa la sii deyn doonaa Oktoobar 31. Waxbadan ka ogow taariikhda Daawashada Sharafta si rasmi ah loo soo bandhigi doono.
Spotify for Wear OS ayaa noo oggolaan doonta inaan dhex marno liisaska, heesaha keydsan iyo waxyaabo kaloo badan
Nooca 'Wear OS' ee Spotify ayaa hadda helay cusboonaysiin weyn oo ballaarinaysa tirada astaamaha ay bixisay illaa hadda.
Chromecast 3 horeyba waa loo iibiyay, laakiin kuma jiro Spain ama Latin America
Jiilka saddexaad ee Chromecast horey ayaa loogu iibiyay Mareykanka iyo dalal kale, kuwaas oo nasiib daro, uusan jirin mid ku hadla Isbaanishka.
Soo saaraha qalabka ciyaaraha ayaa si rasmi ah u soo saaray jiilka labaad ee Razer Phone 2.